WAR CUSUB: AC Milan oo la heshiisey daafaca Mateo Musacchio – Gool FM
(Milano) 24 Feb 2017 – AC Milan ayaa sida lasoo werinayo waxay ogolaadeen in ay €25m kusoo qaataan daafaca Villarreal ee Mateo Musacchio oo muddo dheer bartilmaameed u ahaa.
Sida ku qoran Noticias Argentines oo ka mid ah saxaafadda Argentine, Milan ayaa ugu dambayn laacibkeedii heshay, iyadoo aanu kharashku dhib ku ahayn maaddaama ay sugayso kaashka Sino-Europe Sports oo kooxda la wareegeysa bilowga bishan.
Laacibkan 27-jirka ah ayaa waxaa lala xiriirinayay AC Milan tan iyo sanadkii tegey, waloow ay Rossoneri markii dambe iska dhigtay xiisahaas.
Kooxda Milan ayaa aad ugu baahan daafac dhexe oo adag oo daboola baahida daafaca iyadoo aysan Milan haysanin beddel la isku halleeyn karo oo booskaa ah marka laga yimaaddo Alessio Romagnoli oo weli curdun ah iyo Gabriel Paletta.
SAWIRRO XULA H: Horseed oo guul ka gaartay dhiggeeda Heegan